Polyvinyl utshwala kuyinto polymer zokwenziwa okuyinto encibilikayo kalula emanzini. Etholwe NGO-1924 bamakhemikhali ezimbili - Gonelem naseJalimane - ngosizo ukusabela saponification.
Polyvinyl utshwala - powder emhlophe, kokuba ikhono ukwakha ifilimu. Lokhu polymer unamandla kakhulu futhi ikhululekile, kodwa kusukela lezi kuxhomeke izinga umswakama (bumunca ketshezi), amandla eqine incipha, kanye ductility elikhulu kwenzeka uma ngezinga elithile umswakama. It has izakhiwo hygroscopic, it is kalula ziyoncibilika (ikakhulukazi amanzi). Ngo ezihogelwayo ezifana amafutha kanye amafutha, akusiyo uyakwazi ukuncibilikisa. Uma usebenzisa lokhu izidakamizwa ayinayo imiphumela ezinobuthi, futhi ngenxa yalokho kungenziwa ukuthi ayinangozi.
Polyvinyl utshwala noma PVA ibhalwe kusuka polyvinyl acetate ngu hydrolysis noma alcoholysis futhi ekhiqizwa ngesimo granules noma powder. izindlela ezahlukahlukene zobuchwepheshe, ukusuka kokulula kuya ngempela eziyinkimbinkimbi isikhathi kusetshenziswa ukulungiswa PVA.
Polyvinyl utshwala - ukusetshenziswa
manje PVA isetshenziswa kabanzi. Angaba ukudlala indima thickener nge glue ukwakhiwa amashampu, ungaveza material latex. Isetshenziselwa ngempumelelo ukubuyisela restorers imidwebo. Ngenxa impahla yayo hygroscopic, it is kabanzi ukudalwa izindlela ezihlanzekile. Zonke izinhlobo namanabukeni, tampons kanye pads kuthiwa zenziwe PVA. Ungakhohlwa utshwala polyvinyl, futhi abakhiqizi bokudla. Isetshenziselwa njengenhlangano emulsifier ekukhiqizeni imayonnaise, nososo, ketchups kanye neminye imikhiqizo ukudla, futhi liyasetshenziswa njengendlela ukunambitheka sithuthukisi confectionery.
imithi yesimanje, futhi, uye bamukela ezinye izindawo PVA. It is lisetshenziswe womshini nemithi ethile, ngaphambi bazithobisa kahle bahlanza kusuka ukungcola. Bamehlo polyvinyl utshwala esetshenziselwa ukulungiswa iso amaconsi futhi uwoyela ama-contact lens. Ngisho oncologists bathole isicelo ekwelapheni umdlavuza PVA. Ikakhulukazi, kuyadingeka ukwenza non-kuhlinzwa inqubo embolization. Futhi akusiyo yonke ezahlukene zokusebenza polyvinyl utshwala kwezokwelapha.
Basembonini yendwangu PVA isetshenziselwa ukususwa zikagesi nephepha - I- amaphepha asesebenzile. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ingxenye esisemqoka wokugaya uginindela. Polyvinyl utshwala kuyinto abakhi ezidingekayo futhi metallurgists, tanners futhi Abenzi upende varnishes. Zonke izitshalo akhiqiza Imicu yotshani yokufakelwa asetshenziselwa womshini PVA obanika amandla ngumuntu inqubo Sizing zesivikelo sesifuba.
Ngisho isayensi enjalo yamagciwane uye wasebenzisa PVA ku immobilization enzyme namaseli. Polyvinyl utshwala isicelo atholakala ukuphrinta, ikakhulukazi screen zokunyathelisa. Kulesi ensimini isetshenziswa njengoba ungqimba polymer ngenqubo ukukopisha. Ingasetshenziselwa futhi njengoba isembozo noma zokuzivikela ekukhiqizeni izakhi enamathela ngenxa yokuthi ungqimba PVA isuswe kalula.
Ukwenza umkhakha nokusebenzisa isikhunta liyasetshenziswa ngempumelelo, lokhu polymer. manje PVA is Sekuvamile amaningi emnothweni. Itholakala ngentengo okulula ezokuthutha (kuvamise izikhwama zepulasitiki, phama izikhwama iphepha) endaweni yezokuthutha evaliwe ukuze ugweme ukuthola ezimanzi. Njengoba utshwala polyvinyl kuyinto oluvuthayo, kubalulekile ukuthobela le mithetho yokuphepha ngesikhatsi isitoreji kanye nokuphathwa.
Kodominirovanie - lena okungavamile ukuxhumana phakathi alleles
Nobel Prize Russia neSoviet Union ngo-physics, ezomnotho, kanye nezincwadi
Wormholes emkhathini. hypothesis yezinkanyezi
Corner iziko emaqaqasini egumbini lokuphumula: izithombe
Blade futhi Soul: ukuhamba
Depakine Crono. Izibuyekezo
Islamic New Year: izici kanye namasiko.
Indlela yokusebenzisa i-tablet - izimiso of abaphathi bayo
Machinist compressor unit: incazelo umsebenzi
Party engekho emthethweni. Ukwahlukanisa amaphathi uhlele kabusha imicondvo lemcoka kanye nabaholi